30 / 04 / 2021 30 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1845 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, 21318 သစ်ပင်အိမ်, 41441 မြင်းသင်တန်းနှင့်နောက်တွဲယာဉ်, 41677 သစ်တောရေတံခွန်, 41679 သစ်တောအိမ်, 41684 သူartအင်းအိုင် City ဂရန်းဟိုတယ်, 41685 မှော် Funfair Rollercoaster, Disney, Friends, Ideas, Lego, Lego Disney, Lego Friends, Lego Ideas
ဒီနွေရာသီရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေ Lego Friends အစုံအလင်ပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများသည်အသေးအဖွဲဆောင်ပုဒ်အတွက်ဟိုတယ်အသစ်နှင့် rollercoaster ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။
ဒတ်ခ်ျလက်လီအရောင်းဆိုင် ဗန် der Meulen ငါးသစ်၏ပုံရိပ်တွေထုတ်ဝေခဲ့သည် Friends 41685 မှော်အတတ် Funfair Rollercoaster ရှိကြီးမားသောဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံပုံစံများမှသည်အလွန်သေးငယ်သောအချပ်များအထိ 41677 သစ်တောရေတံခွန်။ ဒါကသစ်တော setting ကိုလည်းကိုယ်စားပြုသည် 41679 သစ်တောအိမ်.
41684 သူartအင်းအိုင် City ဂရန်းဟိုတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရွက်တစ်ရွက်ကိုယူသည် 21318 သစ်ပင်အိမ်ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်လိမ္မော်ရောင်၊ အညိုရောင်နှင့်အဝါရောင်အပိုင်းအစများနှင့်ဆောင်းရာသီအတွက်အဖြူနှင့်အပြာရောင်အုတ်များဖြင့်ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်ဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤအသုတ်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသော 4+ သည် ၂၀၂၁ အစောပိုင်းမှဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ subtheme ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည် 41441 မြင်းသင်တန်းနှင့်နောက်တွဲယာဉ်။ Van der Meulen မှပုံများကိုအထက်ပြခန်းတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဤအရာများအတွက်စျေးနှုန်းများသို့မဟုတ်ဖြန့်ချိမည့်ရက်များကိုယခုအချိန်တွင်မဖော်ထုတ်နိုင်သေးသော်လည်းဤပုံရိပ်များ၏အချိန်ကိုက် (နှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကချမှတ်ခဲ့သောထုံးတမ်းစဉ်လာ) ကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားဇွန်လတွင်စင်ပေါ်များတွင်မြင်တွေ့ရန်မျှော်လင့်သင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
အလားတူလက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ယခုနွေရာသီ၏ပထမပုံရိပ်များကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့သည် Lego Disney အစုံတွေ၊ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
← အမှတ်တံဆိပ်အသစ် LEGO ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်တွေ Disney နွေရာသီ 2021 စုံ
အသစ် LEGO Minecraft နွေရာသီ 2021 အစုံထုတ်ဖေါ် →